Shuruudaha & Xaaladaha | Asturnaanta-Guud Shirkadaha Adeegyada Shirkadaha Inc.
SHURUUDAHA WEBSITE IYO SHURUUDAHA
Shuruudaha iyo shuruudahaan waxay ku maamulaan isticmaalkaaga boggan; adiga oo isticmaalaya website-kan, waxaad aqbashaa shuruudaha iyo shuruudaha oo dhan. Haddii aadan ku raacsanayn shuruudaha iyo shuruudaha ama qeyb ka mid ah shuruudaha iyo shuruudaha, waa inaadan adeegsan shabakadan.
Waa inaad ugu yaraan tahay 18 sano jir si aad u isticmaasho degelkan. Adigoo adeegsanaya websaydhkan iyo adoo oggolaanaya shuruudahan iyo shuruudaha aad dalbaneyso oo matali karto inaad ugu yaraan tahay da'da 18 da'da.
Websaydhkan ayaa adeegsanaya cookies. Adigoo adeegsanaya websaydhkan oo aad ku raacsan tahay shuruudahan iyo shuruudahan, waxaad oggolaatay adeegsiga shirkadaheena ee isticmaalka kiimikada iyadoo la raacayo shuruudaha nidaamka guud ee shirkadaha gaarka loo leeyahay / siyaasadaha cookies-ka.
Ruqsad u Leh Adeegsiga Websaydh
Haddii aan si kale loo sheegin, Adeegyada Guud ee Shirkadda, Inc. (shirkad Nevada ah) iyo / ama shatiiyayaasheedu ay ku shaqeeyaan astaanta Shirkadaha waxayna leeyihiin xuquuqaha xuquuqda hantida aqooneed ee websaydhka iyo sheyga ku yaal bogga. Iyaga oo hoos imanaya laysanka hoosta, dhammaan xuquuqaha hantida aqooneed ayaa loo hayey.
Waad arki kartaa, kala soo bixi kartaa ulajeeddooyinka kaydinta oo keliya, iyo bogag daabacan ama waxyaabo kale oo websaydh ah oo ku saabsan isticmaalkaaga shaqsiyeed, iyada oo ku xaddidaysa xaddidaadaha hoos lagu dhigay iyo meelaha kale ee shuruudahan iyo shuruudahan.
Waa inaadan ahayn dib u daabacida sheygan websaydhka (oo ay ku jiraan jamhuuriyad mareeg kale); iibso, kireysto ama alaabo liisanka laga helo websaydhka; tus wax walboo websaydh ah oo dadweynaha ah; soo saari, nuqul, koobi ama si kale uga faa iidayso wax ku saabsan websaydhkan ujeeddooyin ganacsi; wax ka beddeli ama haddii kale wax ka beddel shey kasta oo websaydh ah; ama dib-u-qaybin wax ka soo baxa websaydhkan marka laga reebo waxa ku jira, haddii ay jiraan, gaar ahaan iyo si cad loogu diyaariyey dib-u-qaybin.
Meesha waxyaabaha si gaar ah loogu diyaariyey dib-u-qaybin, waxaa keliya oo dib loogu qori karaa oggolaansho qoraal ah oo laga helo hoggaanka guud ee Adeegyada Shirkadda, Inc. shirkad Nevada ah.
Isticmaal la aqbali karo
Waa inaadan adeegsan shabakaddan si kasta oo keeni karta, ama keeni karta, waxyeello u geysan karta barta internetka ama maqnaanshaha helitaanka ama helitaanka bogga internetka; ama hab kasta oo sharci darro ah, sharci darro ah, been abuur ama waxyeelo leh, ama la xidhiidha wax sharci darro ah, sharci daro ah, khiyaano leh ama ujeeddo waxyeello leh ama hawl.
Waa inaadan adeegsan shabakaddan si aad nuqul u sameyso, kaydiso, martigeliso, gudbiso, u dirto, u isticmaasho, u isticmaasho, u daabacato ama u qaybisid wax kasta oo ka kooban (ama ku xiran) wax kasta oo casri ah, fayraska kombiyuutarka, farasta trojan, dixirigga, keystrator keystrator, rootkit ama wax kale software kombiyuutarka xun.
Waa inaadan sameynin waxqabayada aruurinta nidaamsan ama otomaatig ah (oo ay kujirto xayiraad la'aan, qodista xogta, soosaarista xogta iyo soo goosashada xogta) boggaan iyadoo aan la helin oggolaanshaha qoraalka ah ee Shirkadda Adeegyada Guud.
Waa inaadan adeegsan shabakaddan si aad u gudbiso ama u dirto isgaarsiinta ganacsiga ee aan lagama maarmaanka aheyn.
Waa inaadan u isticmaalin degelkan ujeeddooyin kasta oo laxiriira suuq-geynta adigoon bixin ogolaansho qoraal ah ee Adeegyada Guud.
Gaaritaanka meelaha qaarkood ee websaydhkan waa mid xadidan. Adeegyada Guud ee Shirkadda ayaa leh xuquuqda xaddidaya galaangalka meelaha kale ee websaydhkan, ama runtii websaydhkan oo dhan, ee ikhtiyaarka Adeegyada Shirkadda.
Haddii Adeegyada Shirkadda Guud ay ku siiso Aqoonsi adeegsade iyo erayga sirta ah ee kuu suurtogelinaya inaad marin u hesho meelaha xaddidan ee websaydhkan ama waxyaabo kale ama adeegyo, waa inaad hubisaa in lambarka Aqoonsiga iyo lambarka sirta loo ilaaliyo.
Adeegyada Guud ee Shirkadda ayaa ku joojin kara Aqoonsigaaga isticmaale iyo lambarka sirta ah ee Adeegyada Guud ee ikhtiyaarka ah iyada oo aan la helin ogeysiis ama sharraxaad.
Shuruudahan iyo shuruudaha, "content user" macnaheedu waa maaddo (oo ay ku jirto qoraalka aan xadidnayn, sawirrada, qalabka maqalka, qalabka fiidiyowga iyo maqal-muuqaal) oo aad adigu u soo gudbiso boggaan, wax kasta oo ujeedo ah.
Waxaad siisaa Adeegyada Guud ee Shirkad caalami ah, oo aan laga noqoneynin, ka-madax-bannaanayn, liisan-madax-bannaan si loo isticmaalo, dib-u-dejiso, ula qabsan karo, loo daabaco, loo tarjunto loona qaybiyo macluumaadkaaga isticmaaleyaasha warbaahinta kasta ee jirta ama mustaqbalka. Waxaad sidoo kale siineysaa Adeegyada Guud ee Shirkadda Xaquuqda liisan-hoosaadka xuquuqdan, iyo xuquuqda aad ku soo qaaddo tallaabo lagu xadgudbayo xuquuqdan.
Waxyaabaha isticmaalahaagu ka kooban yahay waa inaysan noqonin sharci darro ama sharci darro, waa inaysan ku xad-gudbin wixii sharci saddexaad ee xuquuqda sharciga ah, waana inaysan awood u lahaan karin inay ku kacdo tallaabo sharci ah ha noqoto mid ka dhan ah adiga ama Adeegyada Shirkadda guud ama dhinac saddexaad (kiis kasta oo hoos yimaada sharci kasta oo khuseeya) .
Waa inaadan u soo gudbin wax macluumaad ah oo ku saabsan website-ka kaas oo ah ama waligiis uu ahaa mawduuca hanjabaad ama hanjabaad sharci ah ama cabashooyin kale oo la mid ah.
Adeegyada Guud ee Shirkadda ayaa leh xuquuqda dib-u-habeynta ama baabi'inta wax kasta oo loo soo gudbiyo websaydhkan, ama lagu keydiyo shabakadaha Adeegyada Shirkadda guud, ama lagu marti-geliyey ama lagu daabacay mareegtan.
Iyada oo aan loo eegin Xuquuqda Adeegyada Shirkadaha guud ee hoos timaada shuruudahan iyo shuruudaha la xiriira waxyaabaha isticmaalaha ka kooban, Adeegyada Guud ee Shirkaddu ma fuliyaan inay la socdaan soo gudbinta waxyaabaha la midka ah, ama daabacaadda waxyaabahaas oo kale websaydhkan.
Lama hubo shuruudaha
Websaydhkan waxaa lasiiyaa “sidii la rabay” iyada oo aan lahayn wax matail ah ama dammaanad qaad ah, oo la muujiyey ama la muujiyey. Adeegyada Guud ee Shirkadaha ma yeeshaan wax matalaya ama dammaanad qaad ah oo la xiriira websaydhkan ama macluumaadka iyo agabyada lagu soo bandhigay websaydhkan.
Iyadoo aan loo kala eexan jiritaanka sadarka hore, Adeegyada Guud ee Shirkadaha ma ballanqaadaan in degelkan si joogto ah loo heli karo, ama loo heli karo gabi ahaanba; ama macluumaadka websaydhkan waa mid dhammeystiran, run ah, sax ah ama aan-khalad ahayn.
Ma jiraan wax ka socda websaydhkan, ama loogu talagalay inuu ka koobnaado, talo nooc kastaba ha noqotee. Haddii aad u baahan tahay talo laxiriirta wixii sharci ah, canshuur, dhaqaale ama arrin caafimaad waxaad la tashan kartaa xirfadle ku habboon.
Adeegyada Guud ee Shirkadu mas'uul kama noqon doontid (haddii loo eego sharciga xiriirka, sharciga wax ka sheegashada ama wixii kale) ee la xiriira waxa ku jira, ama adeegsiga ama haddii kale xiriir la leh websaydhkan:
ilaa xad ah in websaydhku yahay mid bilaash ama aan bilaash ahayn, wixii khasaare toos ah ah;
wixii khasaare ah oo aan toos ahayn, khaas gaar ah ama natiijo ahaaneed; ama
wixii khasaare ganacsi ah, khasaaro dakhliga, dakhliga, faa'iidooyinka ama kaydka la filayo, luminta qandaraasyada ama xidhiidhada ganacsiga, lumitaanka sumcad ama nasiib daro, ama lumid ama musuqmaasuq macluumaadka ama xogta.
Xad-gudubyadaas ayaa mas'uul ka ah xitaa haddii Adeegyada Guud ee Shirkadaha si cad loogula taliyo khasaaraha ka dhalan kara.
Ma jiraan wax ka jira websaydhkan oo ka reebi doona ama xaddidaya dammaanad kasta oo uu sharcigu ogol yahay inay sharci darro tahay in laga saaro ama la xaddido; oo ma jiro wax been abuur ah oo websaydhkan ka reebi doona ama xaddidi doona mas'uuliyadda Adeegyada Shirkadda ee quseysa mid kastoo:
geeri ama dhaawac shaqsiyeed oo ay sababtay dayacaadka Adeegyada Shirkadaha Guud; been abuur ama been abuur been abuur ah oo ku saabsan qeybta Adeegyada Guud; ama arin taas oo sharci daro ah ama sharci darro ah in Adeegyada Guud ee Shirkaddu ay ka saarto ama xaddido, ama ay isku daydo ama u caddeyso in laga reebayo ama la xadidayo, mas'uuliyaddeeda.
Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waxaad ku raacsan tahay in ka-goynta iyo xaddidnaanta qaan-sheegashada lagu muujiyey websaydhkan qaan-sheegashada ay macquul yihiin.
Hadaadan u maleynaynin inay macquul yihiin, waa inaadan isticmaalin degelkan.
Waxaad aqbashay taas, iyada oo ah masuuliyad xadeyn qayb ahaan, Adeegyada Guud ee Shirkadaha, Inc., oo ah shirkad Nevada ah, in ay dan ka leedahay in la xaddido mas'uuliyadda shaqsiyadeed ee saraakiisheeda iyo shaqaalaheeda. Waxaad ku raacsan tahay inaadan keenin sheegasho shaqsiyeed saraakiishii howlaha guud, agaasimayaashii ama shaqaalihii ixtiraamka wixii khasaaro ah ee kugu soo dhaca shabakada.
Iyadoo aan laga eexan qodobka kore, waxaad ku raacsan tahay in xaddidaadaha dammaanadaha iyo qaan-sheegashada lagu muujiyey websaydhkan disha wuxuu ilaalin doonaa saraakiisha Adeegyada Guud, shaqaalaha, wakiillada, wakiillada, ku-xigeennada, meeleynta iyo qandaraasleyda-hoose iyo sidoo kale Adeegyada Shirkadda guud, Inc
Qodobbada aan la meelmarin karin
Haddii qayb kasta oo ka mid ah sheegashada websaydhkan, ama la arko, aan lagu fulin karin hoos imaadka sharciga lagu dabaqi karo, ma saameyn doonto dhaqan-galinta qodobbada kale ee sheegashada websaydhkan.
Waxaad halkan ku caddeyn kartaa Adeegyada Guud ee Shirkadda waxaadna ku dadaaleysaa inaad u ilaaliso Adeegyada Shirkadda guud ahaan si aan qarsoodi lahayn wixii khasaare, waxyeelo ah, kharashyo ah, qaan ah iyo kharashyo ah (oo ay kujirto kharash la'aan sharci iyo kharash kasta oo ay bixiso Adeegyada Guud ee shirkadda qaybta saddexaad ee xallinta sheegashada ama muranka Talabixinta la-taliyayaasha sharciga ee shirkadaha guud) ee ay ku dhacdo ama ay kugu dhacdo wixii ku soo xadgudbay adiga oo ka mid ah wax ka mid ah shuruudahaas iyo shuruudahaas, ama ka imanaya sheegasho kasta oo ah in aad jebisay qayb ka mid ah shuruudahaas iyo xaaladaha.
Jebinta Shuruudahan iyo Shuruudahan
Iyadoo aan laga eexsaneyn xuquuqda guud ee shirkadaha guud ee hoos timaada shuruudahan iyo shuruudahan, haddii aad ku xad gudubto shuruudahan iyo shuruudaha si kasta oo ay tahay, Adeegyada Guud ee Shirkadaha ayaa laga yaabaa inay qaadaan ficil sida Adeegyada Guud ee Shirkadda ay u arkaan inay ku habboon yihiin wax ka qabashada jebinta, oo ay ka mid tahay hakinta gelitaankaaga. Websaydhka, oo kaa mamnuucaya inaad gasho websaydhka, xannibo kumbuyuutarrada isticmaalaya cinwaankaaga IP-ga inay galaan degellada, la xiriiridda adeeg bixiyahaaga internetka si aad u weydiisato inay xayiraad geliyaan marin-u-helka boggaaga iyo / ama keenaan dacwado maxkamadeed oo kaa soo horjeedda.
Adeegyada Guud ee Shirkadaha ayaa dib u eegi kara shuruudahan iyo shuruudaha waqti-ka-waqti. Shuruudaha iyo shuruudaha dib loo eegay ayaa lagu dabaqi doonaa isticmaalka degelkan laga bilaabo taariikhda la daabacay shuruudaha iyo xaaladaha dib loo eegay ee ku jira websaydhkan. Fadlan si joogto ah u baar boggan si aad u hubiso in aad taqaanid nooca socda.
Adeegyada Guud ee Shirkadda ayaa wareejin kara, qandaraas hoosaad ama si kale ula macaamili kara xuquuqda guud ee Adeegyada Shirkadda iyo / ama waajibaadka ku xusan shuruudahan iyo shuruudaha adiga oo aan ku ogeysiin ama helin oggolaanshahaaga.
Kama bedeli kartid, qandaraas-siisid ama si kale loola macaamilo xuquuqdaada iyo / ama waajibaadka shuruudaha iyo shuruudahaas.
Haddii bixinta shuruudahan iyo shuruudahan ay go'aamiso maxkamad ama hay'ad kale oo awood u leh inay sharci-darro tahay iyo / ama aan la dhaqan-gelin karin, qodobbada kale ayaa sii socon doona. Haddii wax sharci darro ah ama / ama aan la meelmarin karin ay noqon karto mid sharci ah ama la dhaqan gelin karo haddii qeyb ka mid ah la tirtiro, qeybtaas waxaa loo qaddarin doonaa in la tirtirayo, inta harsan ee la siinayona way sii socon doontaa.
Shuruudahan iyo shuruudahani waxay ka kooban yihiin heshiiskii u dhexeeyey adiga iyo Adeegga Guud ee Shirkadaha ee la xiriira adeegsiga websaydhkaaga, waxayna meesha ka saaraysaa dhammaan heshiisyadii hore ee la xiriira isticmaalka boggaan.
Sharciga iyo Awoodda
Shuruudahan iyo shuruudahan waxaa xukumaya loona dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda Florida, wixii khilaaf ah ee la xiriira shuruudahan iyo shuruudaha waxaa hoos imaan doona awooda u gaarka ah maxkamadaha dhexdeeda gudaha Broward County, Florida.
Diiwaangelinta iyo Ogolaanshaha
Faahfaahinta Adeegyada Shirkadaha
Magaca buuxa ee Adeegyada Shirkadaha waa General Corporate Services, Inc.
Adeegyada Guud ee Shirkadda waxaa laga diiwaangeliyay Nevada.
Cinwaanka guud ee shirkadaha ka diiwaangashan '701 S Carson St., Ste. 200, Magaalada Carson, NV 89701
Cinwaankeeda boostada ayaa ah 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.
Waxaad kala xiriiri kartaa Adeegyada Shirkadda Guud emayl ahaan info@companiesinc.com.